Infographics အားမည်သို့မြှင့်တင်ရန်နှင့်မြှင့်တင်ရမည်နည်း Martech Zone
တနင်္ဂနွေ, နိုဝင်ဘာလ 13, 2011 တနင်္ဂနွေ, အောက်တိုဘာလ 4, 2015 Douglas Karr
စျေးကွက်ရှာဖွေရေး infographics Martech အတွက်အထူးဂရုပြုရမည့်အရင်းအမြစ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ငါအများကြီးထူထောင်နိုင်အောင်အများကြီး Google ကသတိပေးချက် ဟူသောဝေါဟာရကိုသည် infographic ငါကသူတို့ကိုတစ်နေ့လုံးပြန်လည်သုံးသပ်။ infographics သည်အလွန်လူကြိုက်များလာသည်နှင့်အညီ, content တွေကိုစက်မှုလုပ်ငန်းနှင့်အတူလွှမ်းမိုးလျက်ရှိသည် မကောင်းတဲ့ infographics... ဒါကြောင့်ငါတို့ဟာအမြဲတမ်းတန်ဖိုးကိုပေးနေတယ်ဆိုတာသေချာဖို့အတွက်ငါတို့ဝေမျှတာဒါမှမဟုတ်မျှဝေတာကိုတော်တော်လေးရှုပ်ထွေးတယ်။
အကြောင်းပြချက် (၁၀) ချက်သည်ရုပ်ပုံများသည်သင်၏စျေးကွက်ရှာဖွေရေးမဟာဗျူဟာ၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖြစ်သင့်သည်
သင်၏ Infographic အတွက်မှန်ကန်သောဖောင့်များနှင့်အရောင်များကိုရွေးချယ်ခြင်း
အဘယ်အရာကိုအလွန်ကြီးစွာသော infographic စေသည်?
Infographics သည်ဒီဇိုင်းရေးဆွဲရန်နှင့်ဒီဇိုင်းဆွဲရန်အလွန်စျေးကြီးပြီး၊ ဒေါ်လာ ၂၅၀၀ စီစီကျသင့်သည်။ သို့သော်ဤစာမဖတ်ပါနှင့်။ infographics ကိုဒီဇိုင်းဆွဲရန်မလိုအပ်ပါ သူတို့ကိုအားသာချက်ယူပါ။ Infographics သည်အထူးသဖြင့်မျှဝေရန်ဒီဇိုင်းရေးဆွဲထားခြင်းဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်ကောင်းမွန်သော infographics ကိုရှာဖွေခြင်းနှင့်သင်၏ site ပေါ်တွင်တင်ခြင်းသည်မဟာဗျူဟာတစ်ခုဖြစ်နေဆဲဖြစ်သည်။ ဂူဂဲလ်သတိပေးချက်များ မှလွဲ၍၊ သတင်းအချက်အလက်များကိုစုဆောင်းပေးသည့်ကောင်းမွန်သောဆိုဒ်များလည်းရှိသည်။ သင်သည်သင်၏ကိုယ်ပိုင်နေရာကိုပင်တင်ပြရန်ကြိုးစားနိုင်သည်။ များစွာသောသူတို့သည်သင့်အားအကောင့်တစ်ခုထပ်ထည့်ရန်ခွင့်ပြုသည်!
Alltop ထိပ်တန်း Infographics - ထိပ်တန်း Infographic အရင်းအမြစ်များကိုစုစည်းထားခြင်း။
B2B Infographics - B2B စျေးကွက်ရှာဖွေရေးတွင်ကောင်းမွန်သောရုပ်ပုံများ။
ကော်လံငါး - မယုံနိုင်လောက်အောင်သတင်းအချက်အလက်နှင့်သက်ဆိုင်သောဒီဇိုင်းကုမ္ပဏီ။
Cool Infographics - အေးအေးဆေးဆေးသတင်းအချက်အလက်များကိုဝေမျှရန်ရည်ရွယ်သည့်ဘလော့ဂ်တစ်ခု။
နေ့စဉ်သတင်းအချက်အလက် - Infographic World မှ ၀ က်ဘ်ဆိုက်တစ်ခု၊
Graphs.net - infographics အတွက်အခြားမျှဝေသည့် site တစ်ခု။
အချစ်ဇာတ်လမ်း - infographics အတွက်အရင်းအမြစ်တစ်ခုဖန်တီးရန်အတူတကွလာကြသောအင်တာနက်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးအဖွဲ့ငယ်လေးတစ်ခု။
Infographic စာရင်း - သတင်းအချက်အလက်များကိုမျှဝေရန်ရည်ရွယ်သည့်ဘလော့ဂ်တစ်ခု။
Infographics ဟန်ပြ - အင်တာနက်ပေါ်တွင်အကောင်းဆုံး infographics & data visualization ကိုစုဆောင်းသည်။
Nourcing - Nowsourcing ၀ န်ဆောင်မှုခံယူသူများအတွက်ဒီဇိုင်းရေးဆွဲထားသော infographics စုဆောင်းခြင်း။
သတင်းအချက်အလက်ပေးပို့ပါ - Killer Infographics ကပြုလုပ်သည်။
Visual.ly - သတင်းအချက်အလက်ရှာဖွေခြင်းနှင့်မျှဝေခြင်းအတွက်အလွန်ကောင်းမွန်သော site တစ်ခု။
Visual Loop - Infographics, Maps, Charts နှင့်အခြားကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိအခြားကမ္ဘာအနှံ့အပြားရှိ Visual Visual Designs များနှင့်ချိတ်ဆက်ထားသောအဆက်မပြတ်စီးဆင်းသောစီးဆင်းမှုတစ်ခုဖြစ်ပြီး၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ဘ ၀ ကိုနားလည်ရန်ပိုမိုလွယ်ကူစေသည်။
Voltier Creative - နောက်ထပ်မယုံနိုင်လောက်အောင်ထူးခြားသောအင်ографနာဒီဇိုင်းကုမ္ပဏီ။
ဒီမှာဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်ရှိပါတယ် နောက်ထပ် 100 သတင်းအချက်အလက်အရင်းအမြစ်များအွန်လိုင်း!
ရေးသားထားသောအကြောင်းအရာထည့်ပါ infographic အကြောင်း၊ သင်ဘာကိုကြိုက်လဲ၊ ဘာကြောင့်မင်းပရိသတ်ကိုဝေမျှဖို့ဆုံးဖြတ်ရတာလဲဆိုတဲ့အဓိကအတွေးတွေနဲ့။ ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်များသည်စကားလုံးများအားအချက်အလက်စာရင်းအင်းပေါ်တွင်ဖတ်။ မရပါ၊ သို့သော်သင်၏ဆိုဒ်တွင်ပါသောစကားလုံးများကိုသူတို့ဖတ်နိုင်သည်။ သင့်ရဲ့ကွန်ရက်စာမျက်နှာကိုတွေ့ရှိနိုင်တဲ့ကောင်းတဲ့ဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့အကြောင်းအရာတချို့ကိုရေးပါ။ သင့်ရဲ့သတင်းအချက်အလက်မသွင်းထားရင်တောင်မှ!
ကူးယူပါသို့မဟုတ် Embed? ပုံမှန်အားဖြင့် infographics သည် code နှင့်အတူ infographic ကို embed လုပ်ရန်နှင့်သင်၏ site ပေါ်တွင်မျှဝေရန် (ပုံမှန်အားဖြင့်ရင်းမြစ်သို့သော့ချက်သောသော့ချက်စာလုံးနှင့်အတူ) ကိုဖော်ပြသည်။ Martech တွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်ပုံမှန်သတင်းအချက်အလက်များကိုကျွန်ုပ်တို့၏ဆာဗာသို့တင်ပို့လေ့ရှိသည်။ အကြောင်းမှာကျွန်ုပ်တို့၌မြန်ဆန်သောအိမ်ရှင်နှင့်အကြောင်းအရာပေးပို့ခြင်းကွန်ယက်ကြီးမားသောကြောင့်ဖြစ်သည် StackPath CDN။ Infographics သည်ကြီးမားသောဖိုင်များဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်သင်သည်သင်၏ site ပေါ်တွင်၎င်းတို့ကိုမြန်မြန်ဆန်ဆန်အမှုမဆောင်နိုင်လျှင်၊ သူတို့ထည့်ထားသောကုဒ်ကိုအသုံးပြုပါ။
အဆိုပါ Infographic မြှင့်တင်ရန်! သတင်းအချက်အလက်များကိုတင်ရန်နှင့်တစ်စုံတစ် ဦး ကရှာတွေ့မည်ဟုမျှော်လင့်ရုံဖြင့်မလုံလောက်ပါ။ သင်၏ infographic ကိုဖော်ပြပြီးတာနဲ့နေရာတိုင်းတွင်ကြော်ငြာပါ။ LinkedIn, StumbleUpon, Twitter, Facebook, Digg, Reddit, Google + …ဘယ်နေရာမှာပဲရှိရှိ၊ ဘယ်နေရာမှာပဲရှိရှိ၊ ခိုင်မာသောပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းများသို့မဟုတ်ဖော်ပြချက်များကိုရေးသား။ သတင်းအချက်အလက်ကိုရှာဖွေသောအခါလူများရှာဖွေမည့်ဝေါဟာရများဖြစ်သည်။
မင်းကမင်းကိုမျှဝေမယ်ဆိုရင် ကိုယ်ပိုင် infographic, တင်ပြပါ ကြိုက်နှစ်သက်သောဆိုဒ်များသို့ Visual.ly အပိုဆောင်းထိတွေ့မှုအတွက်။ ထို့အပြင်တစ် ဦး ထား၏ သတင်းထုတ်ပြန်ချက် ကထွက်။ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာသတင်းထုတ်ပြန်ချက်ဖြန့်ချိခြင်းသည်ဒေါ်လာထောင်နှင့်ချီ။ လည်ပတ်နိုင်သော်လည်းအခွင့်အလမ်းအလွန်ရှိသောဝက်ဘ်ဆိုက်များမှ၎င်းတို့၏ infographics အားနိုင်ငံတကာတွင်ဖြန့်ဝေနိုင်ရန်အတွက်အောင်မြင်ခဲ့သည်။
သင်၏ကွန်ရက်စာမျက်နှာသို့မဟုတ်ဘလော့ဂ်ကိုပိုမိုအသွားအလာနှင့်အာရုံစူးစိုက်မှုပိုမိုမြန်ဆန်စေရန် infographics ၏အားသာချက်ကိုယူပါ။ ၎င်းသည်အလုပ်လုပ်သောမဟာဗျူဟာတစ်ခုဖြစ်သည်။
Tags: infographics ဝယ်ကြလော့ဒီဇိုင်း infographicsinfographics ဖြန့်ဝေinfographics ရှာပါသတင်းအချက်အလက်မြှင့်တင်ရေးinfographic မဟာဗျူဟာများinfographics သတင်းရင်းမြစ်infographics သြဇာinfographics မြှင့်တင်ရန်infographics များအတွက်အကြောင်းပြချက်
9:2012 pm မှာဖေဖော်ဝါရီ 8, 33
ဒေါက်ဂလပ်, ငါမကြာသေးမီက (အများအားဖြင့် Pininterest ကနေ) infographics ရှာဖွေတွေ့ရှိခြင်းနှင့်သင်၏ရှင်းပြချက်နှင့်အရင်းအမြစ်များကိုတကယ်တန်ဖိုးထားတယ်။ နွေးထွေးစွာဖြင့်ဆူ
9:2012 pm မှာဖေဖော်ဝါရီ 11, 28
social_lady1 @: disqus အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
26:2012 pm မှာဖေဖော်ဝါရီ 8, 52
မင်္ဂလာပါ၊ ဒေါက်ဂလပ်၊ ကောင်းတဲ့ပို့စ်၊ မင်းစာဖတ်သူတွေအတွက်နောက်ထပ်အကြံပေးချက်နှစ်ချက်ထပ်ထည့်ပါ။ ပထမ ဦး စွာ Infographics အတွက် AllTop (http://infographics.alltop.com/ဤခေါင်းစဉ်နှင့်ပတ်သက်သည့်ထိပ်ဆုံးဘလော့ဂ်များနှင့်ဆိုဒ်များကိုသင်ဘယ်မှာရှာမည်နည်း။ နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ကိုယ်ပိုင် Visual Loop (http://visualoop.tumblr.com/), 20.000 (!) လောကီနိုင်ငံအရပ်ရပ်ရှိသမျှကျော်ထံမှ Infographics အပေါ်ယခုပိတ်။
26:2012 pm တွင်ဖေဖော်ဝါရီ 5, 49 တွင်
@ NigelMF1: ကျေးဇူးတင်ပါတယ် disqus! ငါသူတို့ကိုစာရင်းထဲသို့ထည့်သွင်းပါတယ်!
16:2015 pm တွင်စက်တင်ဘာ 1, 02 မှာ
စာရင်းကောင်း ကျွန်ုပ်အကြိုက်ဆုံးတစ်ခုမှာ Alltop ဖြစ်ပြီး infographics အတွက်သာမကအရာရာတိုင်းအတွက်ဖြစ်သည်။ Alltop စာသားအားလုံးအဘို့အစာမျက်နှာတစ်ခုရှိသည်!